Nord DRIVESYSTEMS inofambisa denga remuchadenga wepasi rose rinowira wepasi panzvimbo yemvura yekurasa marara muChur, Switzerland. Imwe yekutungamira yepasi pekugadzira tekinoroji zvigadzirwa mumunda wezvigadziriso zvemagetsi uye zvemagetsi [More ...]
Kushambadzira kwechando kwemigwagwa, Migwagwa yemigwagwa uye Kupfuura Mu Ankara
Ankara Metropolitan Municipality iri kuchenesa nzira uye kudarika dzinoshandiswa nevanhu vanofamba netsoka, kunyanya mumigwagwa mune mikuru mikuru uye munzira uye mumigwagwa nekuda kwekudonha kwemazaya echando kuri kushanda muChikurumbira. Urban Aesthetics [More ...]
TÜVASAŞ inoenderera mberi kugadzira yekutanga Nyika uye Dzimba Dzemagetsi Magetsi Chitima, uye iri kugadzirira kugadzira Milli Tren nezvivakwa zvemukati. Kunyangwe chitima chemagetsi yenyika chinogadzirwa muTÜVASAŞ chakagadzirwa nemuviri wealuminium, [More ...]
Vanoda kusvika 20 Mabasa eCypriot neTurkey World Awarded Artists Achaitika mu "Günsel Art Museum", ichavhurwa kuNicosia Derebo munaFebruary 700, zuva iro Günsel richasimudzirwa. Nyika yedu yepanyika uye yenyika [More ...]
Vakahwina muCapiton Musikana Wemakwikwi akaitirwa mukati mekuyera kweUludağ Nguva yechando Mutambo, wakarongwa kechina gore rino neBursa Metropolitan Municipality, vakapihwa goridhe. Mubairo wekutanga, wechipiri newechitatu nzvimbo mumapoka maviri akasiyana, Metropolitan [More ...]
Vanoshanya Eastern Express Vanogamuchira EU Ambassadors Vanobva
EU-Turkey pamwe "riri 07.02.2020 kuti musangano Transport uye Infrastructure wegurukota omeri Fatih Sayan, Selim Dursun, Musoro EU nhume Christian Berger, EU uye External Relations General Manager Erdem Poles, TCDD [More ...]